100-ka mid ah ciidamada AMISOM oo la geeyay Baydhabo – Radio Daljir
100-ka mid ah ciidamada AMISOM oo la geeyay Baydhabo
Baydhabo, Apr 06 -Boqol askari oo katirsan ciidamada Uganda iyo Burundi ee howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ka wada magaalada Muqdisho ayaa la geeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Taliye kuxigeenka ciidanka AMISOM Jen. Audace Nduwumunsi ayaa waxaa uu sheegay qorshaha ciidanka la geeyay magaalada Baydhabo inuu yahay sidii amaanka magaalada Baydhabo ugala wareegi lahaayeen ciidamada dowladda Itoobiya oo la filayo dhamaadka bishan April inay ka baxaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ciidamada dowladdaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo isbiirsanaya ayaa 23-kii bishii Febraayo ee sanadkan galay magaalada Baydhabo, kadib markii ururka Al-Shabaab uu faarujiyay fariisimihii ay ku lahaayeen magaalada Baydhabo.
Midowga Afrika ayaa sidoo kale balanqaaday inay dhowaan tegi doonaan magaalada Beledwayne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay xiligaan joogaan ciidamo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jirta.